Horudhac: Chelsea vs Newcastle United… (The Blues oo caawa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii shanaad oo xiriir ah tartammada oo dhan) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Newcastle United… (The Blues oo caawa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii shanaad oo xiriir ah tartammada oo dhan)
Haaruun February 15, 2021
(London) 15 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii shanaad oo xiriir ah tartammada oo dhan marka ay sii wadi doonaan kal ciyaareedkooda Premier League ee 2020-21.
The Blues ayaa caawa oo Isniin ah, garoonkeeda ku soo dhoweynaysa naadiga Newcastle United, waxaana ay doonayaan inay afarta sare ee horyaalka gaaraan oo ay ka sare maraan Liverpool.
Chesea ayaa horumar sameynaysa tan iyo markii ay macallinkeeda u magacaabatay Thomas Tuchel, waxayna u soo dhaqaaqeen kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka Premeir League.
Dhinaca kale Kooxda Newcastle United oo guuleysatay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Ingiriiska ayaa weli ka cabsi qabta inay u laabato heerka labaad, waxaana ay qarka u saaran tahay saddexda kaalimood ee ugu hooseeya horyaalka Premier League.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 11:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Garsooraha: Peter Bankes (England)
Timo Werner oo seegay kulankii Chelsea ay guusha ka gaartay Barnsley kaddib dhaawac yar oo lugta ka soo gaaray ayaa taam u noqon kara kulankan, halka Andreas Christensen laga yaabo inuu ciyaaro inkastoo lagu qasbay inuu ka baxo garoonka Oakwell madax xanuun awgiis.
Kai Havertz ayaa shaki uu ku jiraa dhaawac yar oo aan la cayimin awgii, halka kulankaan uu dhaqso ku yimid oo uu hooska ka soo galay Thiago Silva.
Callum Wilson, Fabian Schar iyo Javier Manquillo ayaa dhammaantood garoomada ka maqnaan kara ilaa siddeed isbuuc kaddib markii ay ku dhaawacmeen kulankii Newcastle ay guusha ka gaartay Southampton.
Jeff Hendrick ayaa helay hal kulan oo ganaax ah.
Ciaran Clark ayaa diyaar u ah kulankan kaddib markii uu seegay kulankii Saints maadaama ay saaxiibtiis foolanaysay, waxaana soo raaci doona daafacyada ee Jamaal Lascelles iyo Federico Fernandez kuwaasoo ku dhow inay ka soo laabtaan dhaawacyo muqura ah oo ay la maqan yihiin.
>- Chelsea ayaa guuleysatay 18 ka mid ah 25-kii kulan ee horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay naadiga Newcastle.
>- The Magpies kooxda lagu naynaaso ayaa guuldarro la kulantay todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka ku soo ciyaartay garoonka Stamford Bridge, waxaa ay dhalisay muddaas saddex gool oo kaliya, waxaana laga dhaliyey 18 gool.
>- Blues ayaa gaartay saddex guul oo isku xiga oo horyaalka ah, waana in la mid ah 11-kii kulan ee markaas ka horreeyey, waxaana ay haysataa 3 barbaro iyo 5 guuldarro.
>- Markii ugu dambaysay oo ay afar guul oo xiriir ah gaaraan horyaalka, waxay qeyb ka ahayd lix kulan oo xiriir ah oo ay guuleysteen intii u dhexeysay September iyo November 2019.
>- Timo Werner ayaan wax gool ah dhalin 14 kulan oo horyaalka ah tan iyo markii uu gool ka dhaliyay Sheffield United 7-dii November.
>- Olivier Giroud ayaa ka dhaliyay siddeed gool lixdiisii kulan ee ugu horreysay Premier League ee uu ka horyimid Newcastle (dhammaandood waxa uu ka tirsanaa Arsenal), laakiin waxa uu ku guuldarreystay inuu ku daro tiradaas gool kale todobadii kulan ee ugu dambeeyay ee uu ka horyimid kooxda Magpies.
>- Newcastle United ayaa guuleysatay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee la soo dhaafay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, taasoo ka duwan labo gool oo ay gaareen 13-keedii kulan ee markaas ka horreeyey.
>- The Magpies ayaa guuldarro la kulantay 14 ka mid ah 28-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka ciyaartay maalin Isniin ah, dhammaantoodna waxa ay yimaadeen iyadoo ku ciyaareysa meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Ma martigelin kulan horyaalka Premier League ah maalin Isniin ah tan iyo markii ay garaaceen Kooxda Wigan ciyaar dhacday 03 bishii December sanadkii 2012-kii.
>- Callum Wilson oo dhaawacan iyo Jeff Hendrick oo ganaaxan, Miguel Almiron waa ciyaaryahanka kaliya ee ay heli karto Newcaste, kaasoo hal gool ka badan ka dhaliyey horyaalka xilli ciyaareedkan.
Arsenal oo guul ka gaartay Leeds United oo ay soo dhoweysay, xilli uu saddexleey saxiixay Aubameyang
“Uma oggolaan doono Manchester City inay la baxsato horyaalka.” – Ole Gunnar Solskjær